Buy IB Cream Made In Korea FDA Approve (22,500Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
IB Cream Made In Korea FDA Approve
❤ IB cream နဲ့ skin care ​လေး လုပ်​ကြရ​အောင်​ ❤
IB cream ထဲမှာ ပါတဲ့ ပါဝင်​ပစ္စည်း​တွေက ဘာ​တွေလဲ ?
IB cream သုံးခြင်းဖြင့်​ ဘာတွေကောင်းလဲ?👈👈👈
👉👉👉ဝက်ခြံ ၊ တင်းတိတ် ၊မှဲ့ခြောက် ၊အဆီဖု၊ဆားဝက်ခြံ၊ နေလောင်ကွက် ၊ အမည်းစက် ၊ ချိုင့်ခွက် ၊ အမာရွတ်များ အထူးပျောက်ကင်းစေတယ်👌👌👌
👧👧👧ချွေးပေါက်ကျယ်သူများ ၊ချွေးပေါက်ကျဉ်းပြီး မျက်နှာအသားအရေကို ကျစ်လစ်စေပါတယ်💁💁💁
👀👀👀Eye cream ပါလို့. မျက်ကွင်းညိုခြင်း ၊မျက်အိပ်ဖောင်းခြင်း ၊မျက်လုံးတစ်ဝိုက် အရေးအကြောင်းများကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်
💧IB Cream အသုံးပြုပုံ💧
🌞🌞🌞Day cream အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် ဇွန်းဖျားလေးနဲ့. IB တစ်ဇွန်းကို ရေ (သို့) တိုနာ (သို့) serum အနဲငယ်ထည့်ကာ လက်ထဲတွင်ကျဲကျဲလေးရောပြီးလိမ်းပါ
ပြီးရင်အပေါ်က သနပ်ခါး ( သို့) Cream puff (သို့) မိတ်ကပ်ရည် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ထပ်မံလိမ်းခြယ်၍ရပါတယ်​ ☀️☀️☀️(နေ့စဉ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်)
🌛🌛🌛Night Mask Cream အနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင် IB (နှစ်ဇွန်း)ခန့် ယူ၍ ညဘက်တွင်ပေါင်းတင်လိမ်းအိပ်နိုင်ပါတယ်😴😴😴
👀👀👀Eye Cream ပါလို့ မျက်လုံးတစ်ဝိုက် သေချာလိမ်းခြယ်နိုင်ပါတယ်💞
IB Snow White Cream (Made in Korea)
😍 Price -22500 ks
အမည်: IB Cream Made In Korea FDA Approve